Soo dejisan Cookie Monster 3.47 – Vessoft
Soo dejisan Cookie Monster
Cookie bahal – software ah si ay u maareeyaan cookies in daalacashada caan ah. Bahal cookie taageertaa daalacashada, sida Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer iwm software ayaa baaritaanku nidaamka u cookies oo kuu ogolaanaya in aad ka saarto baahnayn ka. Bahal cookie awood u si ay u sameeyaan liiska cookies faylasha, taas oo aan la qaadi doonin inta lagu jiro nadiifinta buuxda. Software waxay leedahay dareen leh oo si sahlan loo isticmaali interface.
Baaritaanka iyo ka saarida cookies
Taageerada daalacashada caan
Liiska cookies jecel
Cookie Monster Software la xiriira:
Українська, Français, Español, Deutsch... Microsoft Silverlight 5.1.40728